Ukuqagela imiphumela yemidlalo yePSL kwisizini ezoqala
Isithombe esigciniwe: Timothy Bernard/ African News Agency(ANA)
Sponsored Content | July 20, 2021
I-PSL ibalwa namanye amaligi amakhulu e-Afrika kwazise nebhola elidlalwa amaqembu agijima kulesi sigaba liyaheha. Nenhlangano ephethe le ligi i-SAFA iyiphethe ngobunyoninco. I-PSL isineminyaka engu-25 yasungulwa kwazise yethulwa ngo-1996 ngemuva kokuthi iNingizimu Afrika ithole inkululeko kwezombusazwe. Ngawo lowo nyaka i-Orlando Pirates yawina i-Caf Champions League neChiefs yaphinde yadlala kule ligi ehlanganise amaqembu asezwenikazi i-Afrika. Nxa isizini isiqala futhi mningi imixhantela engenayo okubalwa i- Sportstake 13 fixtures, ethokozelwa ababhejela ibhola.
Isizini ka- 2020/21 izobalwa emlandweni ngenxa yokuthi yaqla yaze yaphela izihlelwe zingabonakalo ezinkundleni ngenxa yemigomo ye-Covid-19. Lo mgomo ushaye amaqembu amaningi ngokwezimali kwazise ayikho ebingena ebivela ezihlweleni ngoba bezingavumelekile ukuya ezinkundleni. Kuyo le sizini, siphinde sabona kushintsha nabaxhasi, kuphuma i-ABSA kungena iDSTV njengoba iligi isibizwa ngeDSTV Premiership.
Isizini ka- 2021/22 ibukeka sengathi izoqhubeka njengedlule kwazise amaqembu amaningi agijima kulesi sigaba atheze izinduku ezintsha ukuqinisa izikwati zawo. Kuwona lawo maqembu, Amakhosi athenge abadlali abawu-6 kwazise abevaliwe ekuthengeni abadlali ngenxa yesigwebo anikwa sona.
Kazi yimaphi amaqembu azibhekile ekuqedeni kwi-Top 5?
Njengenjwayelo, iMamelodi Sundowns kulindeleke ukuthi izihole phambili kwiPSL njengoba ivikela isicoco sayo. Okwenza leli qembu lase-Chloorkop libe ngelihlelekile futhi lidlale nengcwenga yebhola yingoba aligadli ngabadlali bakuleli kuphela, lixube nabasezwenikazi i-Afrika, Brazil nabase-Uruguay. Amakhosi nezikaMagebhula kubhekwe ukuthi bebhukule ngemuva kokushaya udaka kule sizini edlule. Akubuzwa ukuthi lezi zinkunzi zaseSoweto zizobe zigijima ngabadlali abasha kule sizini ezokwethwasa. Mhlawumbe lokho kungalwenza ushintsho kubuye nesithunzi, kwazise i-Chiefs ne-Pirates ithathwa njengamaqembu amakhulu eNingizimu Afrika ngenxa yomlando wawo ebholeni.
Kuzoba nzima ukuqegela iqembu elizodla umhlanganiso kule sizini ezoqala, kodwa okumqoka kunakho konke wukuthi amaqembu alandela iSundowns kuzomele abhukule impela nxa ezimisele ngokuyiketula.